Ukusheshisa Ukuthuthukiswa Komkhiqizo Wezimoto / I-Createproto - I-Createproto Tech Co, Ltd.
IZIMBONI / Izithuthi
Ukusheshisa Ukuthuthukiswa Komkhiqizo Wezimoto
I-CreateProto igxile ekubonisweni kwezimoto njengensizakalo ephelele esivumele ukuthi sandise ulwazi lwethu nesipiliyoni kule ndawo. Akunandaba kusuka ebufakazini bokuqanjwa komqondo kuya ekuhlolweni kobunjiniyela bemishini, noma kusuka kumakhompiyutha wokukhanyisa angaphandle kuya kuzakhi zangaphakathi zezinto, siyakwazi ukuxhasa kuwo wonke amazinga.
Nqoba imijikelezo yokuthuthuka yomkhiqizo njalo futhi udale ukuguquguquka kokuthengwa kokuthengwa kwezinto nge-prototyping esheshayo nokukhiqizwa kwevolumu ephansi
Imboni yezimoto iguquka ngokushesha okukhulu. Njengoba izitayela zemboni njengokushayela okuzimele, ukuxhumana ebhodini, kanye nezimoto ezi-hybrid / zikagesi ziyaqhubeka nokushayela izinto ezintsha, izinkampani zezimoto ezinesibindi ziphendukela ku-CreateProto ukusheshisa ukuthuthukiswa komkhiqizo omusha futhi zithengiswe ngokushesha. Ngokukhiqiza okusheshayo kwedijithali kanye nempendulo yokwenza okuzenzakalelayo, abaklami nonjiniyela banganciphisa ubungozi bokuklama nezindleko ngenkathi besungula ukuthengwa okuphendula ngokwengeziwe ukuze basabele kangcono ekufuneni komshayeli nabagibeli bezimoto ezenziwe ngezifiso.
Rapid Prototyping Ukushayela Ukuqanjwa Kwezimoto
I-Prototyping Isheshisa Izinyathelo Zokuthuthukiswa Kwezimoto
Imboni yezimoto iyimboni eyinkimbinkimbi futhi enkulu, ebhekene nengcindezi yemakethe idinga ukuphindaphindwa kokuklanywa nokwakhiwa okusha kokuklanywa. Kodwa-ke, ukwakheka kwezimoto nomjikelezo wokuthuthuka kuyinkqubo ende, ngakho-ke ukushesha nokusebenza ngempumelelo kuyibhuloho okufanele ube nalo. Uhlobo lwezimoto lumelela isinyathelo esibalulekile kunqubo yokuqinisekisa phakathi komklamo wokuqala womkhiqizo nokusebenza kokugcina kokukhiqiza.
Eqinisweni, ukubumbana kwezimoto akugcini nje ngokubamba iqhaza elibalulekile ngesikhathi senqubo yokuqinisekisa ukwakhiwa, kepha futhi kuqinisekisa ukuthi izingxenye zenziwa ngezinto ezifanele kakhulu, futhi zihlaziya inqubo yokukhiqiza.
Ama-prototypes ezithuthi ayingxenye ebalulekile yenqubo yonke yobunjiniyela bezimoto evumela onjiniyela ukuthi bazi ukuthi bangenza kanjani ukuthi imikhiqizo emisha yezimoto ikhange kubathengi, ukuxhumana nemibono kubabambiqhaza kanye namaqembu wephrojekthi ngokushesha okukhulu nangendlela efanele, nokufakazela ukubaluleka komklamo ongaba namandla abatshalizimali namakhasimende.
Empeleni, ukukhiqizwa kwemodeli yezimoto kuhlala kudlula kuso sonke isigaba sokwakhiwa kwezimoto nomjikelezo wentuthuko, kufaka phakathi ubufakazi bomqondo, ukubonwa kwemodeli yedijithali yeCAD, ukwakheka nokuqinisekiswa kokusebenza, isivivinyo somsebenzi nobunjiniyela, kanye nokwenza nokukhiqiza inqubo yokuqinisekisa.
I-Automotive Concept Prototype ne-CAD Digital Model
Ngesikhathi sokuqanjwa komqondo kanye nesigaba sokumodela se-3D CAD, abaklami bezimoto babona imibono kuzinto zangempela ngokwakha ama-prototypes esikali ngendlela yokumodela wobumba. Kungabanikeza isisekelo esenziwe ngamabomu esigabeni sokuqanjwa komqondo. Kamuva amasu obunjiniyela we-reverse azosetshenziselwa ukuskena imodeli ukuthola amamodeli we-CAD nokwenza kahle ukwakhiwa.
Le ngxoxo ebuya emuva naphakathi kokuklama kanye nemodeli yezimoto idala inqubo yokuphindaphinda lapho ithuluzi ngalinye liveza amathuba amasha nezinkinga zokuhlola nokuqhubeka nokucwengisisa, futhi kusiza abaklami ukuqonda kangcono ulwazi lomsebenzisi. Lokhu kusebenza kokubili ngaphandle - ukwethula kumakhasimende nababambiqhaza - nangaphakathi - ekusebenzisaneni ngokujule kakhulu nethimba lakho, noma ukuwahlanganisa ukusekela umbono omusha.
Ukuqinisekiswa Kokwakhiwa Nokusebenza Kwezimoto
Lapho ukwakhiwa komqondo sekuqinisekisiwe, isigaba sokwakhiwa kobunjiniyela sidinga uhlobo oluthile olucwengekile ukunquma ukusebenziseka komkhiqizo nokushelela noma yiziphi izinselelo zokwakha.
Onjiniyela bezimoto kwesinye isikhathi babiza lokhu ngokuthi “isigaba seminyuzi.” Ngalesi sigaba, onjiniyela bazokwakha uchungechunge lwama-prototypes asebenzayo ezimoto, bese bebeka imikhiqizo yohlobo oluthile ezimotweni ezikhona. Ngokuya ngokwakhiwa kwamamodeli ahlukahlukene nokusetshenziswa komnyuzi, uhlobo oluthile luvame ukusetshenziselwa ukubheka ifomu elilinganayo lesikhala sengxenye kanye nokuqoqwa kwedatha yokuqala yokusebenza kwemoto.
Lelisu livumela ukuthi babone ukuthi uhlobo lwezimoto luzongena kanjani emotweni futhi luxhumane nezinye izingxenye, futhi lusize ekuhloleni ukwakheka, izinto zokwakha, amandla, ukubekezelelana, ukuhlangana, izindlela zokusebenza, kanye nokwenza izinto.
Ukuhlolwa Kobunjiniyela Nokuqinisekiswa Kwangaphambi kokukhiqizwa
Ngaphambi kokuthi ingxenye yezimoto ingene ekukhiqizweni, onjiniyela bazokwakha ama-prototypes wokuhlola wobunjiniyela obuncane kanye nezinto zangaphambi kokukhiqiza ezilingisa umkhiqizo wokugcina, futhi zilungise ngokushesha imiklamo yazo ngokuya ngokuhlolwa kwangempela nempendulo ukuhlangabezana nokusebenza okudingekayo, ukuqinisekiswa, ukuhlolwa, isitifiketi nezidingo zekhwalithi.
Uhlobo lwezimoto lubalulekile ekuhlolweni kokuphepha. Izimoto eziyizibonelo ezilayishwe ingxenye yokuhlola zifakwa ezimweni ezahlukahlukene futhi zibekwa ezimweni ezimbi kakhulu ukukhomba noma yiziphi izinkinga ezingaphazamisa ukusetshenziswa komkhiqizo noma zidale ukukhathazeka okuphezulu kubathengi.
Okwamanje, ukudala izingxenye zokukhiqiza ezinomthamo ophansi wemikhiqizo emisha yokushayela umshayeli wezimoto kuvumela onjiniyela ukuthi babone izinkinga ezikhona zokukhiqiza futhi banqume nezinqubo zokukhiqiza ezingabizi kakhulu.
Yiziphi izinto zokusebenza ezisebenza kahle kakhulu kuzicelo zezimoto?
Ama-Thermoplastics. Khetha kumakhulu ama-thermoplastics afaka i-PEEK, i-acetal, noma uphe izinto zakho. Gcina ukubekisa ngomaka ngokwezifiso kumaphrojekthi afanelekayo.
Liquid Silicone Rubber.Izinto zenjoloba ezinjenge-fluorosilicone ezingamelana nophethiloli zingasetshenziselwa ama-gaskets, ama-seal kanye ne-tubing. Irabha ye-silicone yokucaca ebonakalayo iyatholakala ngezinhlelo zokusebenza zelensi nezokukhanyisa.
Izinyoni.Ama-prototypes wokuphrinta we-3D ezintweni eziningana zenayiloni ezitholakala ngokusebenzisa i-laser sintering ekhethiwe ne-Multi Jet Fusion. Amanyloni agcwele amaminerali nengilazi athuthukisa izakhiwo lapho kudingeka khona.
I-Aluminium. Le nsimbi esetshenziselwe yonke into esetshenziselwa ukukala ukukhanya inikeza isilinganiso esihle kakhulu samandla nesisindo futhi ingashintshwa ngomshini noma iphrintwe nge-3D.
Kungani udala iProto yokuThuthukiswa Kwezimoto?
Nciphisa ubungozi bokudizayina ngokusebenzisa i-iteration esheshayo kanye ne-prototyping ezintweni zokukhiqiza ngaphandle kokudela isivinini sokuthuthuka.
Ukuzivumelanisa Nezimo Kwe-Supply Chain
Thola ukusekelwa okudingeka kakhulu kwezimo eziphuthumayo ezenziwa phansi, ukukhumbula okuyingxenye, noma okunye ukuphazamiseka kokuthengwa kwezitshalo ezitshalweni zakho zokukhiqiza ngokusebenzisa ukucaphuna okuzenzakalelayo, ukusebenzisa amathuluzi ngokushesha, nezingxenye zokukhiqiza ezinomthamo ophansi.
Qinisekisa ingxenye yejiyometri enezinketho eziningi zemibhalo esezingeni. Ukuhlolwa kwedijithali, i-PPAP, nokubikwa kwe-FAI kuyatholakala.
Ukwenza ngokwezifiso kweMisa
Sebenzisa ukukhiqizwa kwevolumu ephansi ukuze unike amandla izici zezimoto ezahlukahlukene kakhulu nezenzelwe wena ezenzelwe abashayeli banamuhla.
Thuthukisa izinqubo zokukhiqiza ukudala i-automation enkulu kanye nomhlangano wezinto ohlanjululwe ngokuthumela ngokwezifiso.
Ubuchwepheshe Bokudala Izithuthi Bokudala Izithuthi KuPhoyinti Enkambisweni Yakho
Ngeminyaka engaphezu kwengu-10 yobungcweti nobuchwepheshe be-prototyping, i-CreateProto iyachuma kumaphrojekthi ayinselele kwezobunjiniyela bezimoto. Silwela ukuba ngumlingani wakho wokukhiqiza umkhiqizo ogcwele kakhulu embonini yezimoto. Sisebenza ngokukhethekile kwezentuthuko ezahlukahlukene zezimoto nobuchwepheshe bokukhiqiza obusheshayo, ukuhlinzeka ngemishini ye-CNC, ukuphrinta kwe-3D, ukukhipha i-vacuum, ithuluzi le-aluminium elisheshayo, ivolumu yomjovo wevolumu ephansi, nokucutshungulwa kwensimbi, okugcina onqenqemeni lokuncintisana ngensizakalo entsha kanye nabasebenzi abanekhono . Sizosebenza ngokubambisana - kanye nawe - kuzo zonke izinyathelo zokwakhiwa kwezimoto nenqubo yokuthuthuka.
Kusuka ekuhlekisweni okuphelele kwangaphakathi okubandakanya ama-dashboard, ama-consoles, amaphaneli eminyango nezinsika ezingxenyeni zangaphandle ezinjenge-bumper, i-grilles, izibani zangaphambili namalambu we-taights amalambu wokukhanya, ithimba lethu lithembele kuphothifoliyo yenqubo yemishini esezingeni eliphakeme, futhi liwahlanganisa nomsebenzi wokuqedela ebusweni, ngokwesiko amakhono ezandla, nolwazi olujulile lokuxhasa kuwo wonke amazinga embonini yezimoto.
Impahla yethu enkulu isisekelo samakhasimende ethu esikhule ngokushesha ngokusebenzisa izwi lomlomo lamakhasimende emhlabeni jikelele. Siyaziqhenya futhi sihloniphekile ukuhlinzeka ngezixazululo eziphelele zokwenziwa kwabanye babakhiqizi bezimoto abahamba phambili kanye nabaphakeli be-tier one, njenge-BMW, ​​Bentley, Volkswagen, Audi ne-Skoda. Inhloso yethu ukweqa okulindelwe ngamakhasimende futhi siwasize aphumelele emakethe.
IZICELO ZOKUZENZAKALELA NGOKUZENZAKALELAYO
Amandla wethu wokukhiqiza wedijithali asheshisa ukuthuthukiswa kobubanzi bezinto zensimbi nezipulasitiki zezimoto. Izicelo ezimbalwa ezijwayelekile zezimoto zifaka:
Izingxenye zomugqa womhlangano
Izingxenye ze-plastiki dash
Amalensi nezici zokukhanyisa
Ukusekelwa kwe-elektroniki yabathengi esebhodini
-Automakers: kulezi zinsuku zifuna ezinye izici zifakwe kumaphakeji amancane. Leyo yinselelo yethu, ukufaka konke lokho kusebenza kulelo phakethe elincane.
UJASON SMITH, UMDIJIMI, IQEMBU LOKULAWULWA KOMZIMBA
Cnc Prototyping, Rapid Prototyping Futhi Ukukhiqiza, Izinsizakalo Zokuphrinta Nezokushesha ze-3d, Ukuvikela okusheshayo, Cnc Rapid Prototyping, Ukuvikeleka Ngokushesha,